Muuri News Network » KENYA oo qorshe Halis badan ka damacsan Xadka Somalia..
KENYA oo qorshe Halis badan ka damacsan Xadka Somalia..
Sep 26, 2015 - Comments off
Wasaarada Amniga Dowlada Kenya ayaa shaaca ka qaaday in dhamaan baraha ku yaalla Xadka Kenya oo ay kasoo galaan dhaqdhaqaaqa Al-shabaab ay ku xireyso Kaamiradaha qarsoon.
Wasaarada ayaa sheegtay in sidoo kale ay Xadka ku xiri doonaan maalmaha soo socda raadaaro ay uu adeegsan doonto ammaanka xadka ay la leedahay Somalia, si loola socdo dhaqdhaqaaqyada Kooxda.
Wasaaradu waxa ay sidoo kale sheegatay in Fulinta iyo xiritaanka Kaamiradaha iyo agabyo kale oo cusub ay u adeegsan doonto shirkada Kelvin hughes oo qalabkaasi sameysa oo dhawaan ay la gashay Heshiis cusub.
Sidoo kale, qalab cusub ayaa la sheegay in lagula socon doono dadka sida sharci darada ah ugu soo gudbaya xadka Kenya iyo waliba in laga war hayo dhaqdhaqaaqa dhinaca argagixisada ee soo gali kara gudaha Kenya.
Qorshahaani cusub oo ay dowlada Kenya ku xoojinayso ammaankeeda ee dhinaca xadka ay la leedahay Somalia ayaa waxaa ka mid ah dhismaha darbi dheer oo Kenya ay dhawaan ka bilowday xuduudaha ay la wadaagto Somalia.
Laamaha amaanka Kenya ayaa aaminsan in talaabada lagu xiraayo Kaamiradaha ay waxbadan ka badeli doonto amaanka xadka Kenya ee la leedahay Somalia.